राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुबीच मतभिन्नता, ३७ दिनको म्याद थप — OnlineDabali
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुबीच मतभिन्नता, ३७ दिनको म्याद थप
काठमाडौं । प्राथमिकदेखि उच्चशिक्षा सुधार गर्न पुन : गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सरकारले ३७ दिन म्याद थप गरेको छ ।
गत भदौ १६ गते गठन भएको आयोगलाई ४ महिना समय दिइएको थियो । तर, आयोगले समयमा काम सकाउन नसकेपछि सरकारले म्याद थप गरेको हो । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा शिक्षाविद, शिक्षक, निजी विद्यालयका सञ्चालक र विश्वविद्यालयका डीन गरी २४ जना सदस्य रहेका छन् ।
आयोगले यही मंसिर १६ गतेसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नु पर्ने थियो । तर उनीहरु प्रदेशबाट आएका सुझावमै छलफल गरिरहेका छन् । आयोगका सदस्यहरुबीच नै धेरै कुरा मिलेको छैन । निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने कि नियमन गर्ने ? निः शुल्क शिक्षा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई हो कि होइन ? लगायतका विषय अझै अनिर्णीत रहेको छ ।
विश्वविद्यालयको सञ्चालन अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारीप्रति विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै सकारात्मक छैनन् । त्यसका लागि शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भनेर कुनै योजना नभएको आयोगका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।
नयाँ आयोगले अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदनलाई नै टेकेको छ । सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलमा पनि कुनै नयाँ सुझाव आएको छैन । विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको हकमा के गर्ने ?
प्राविधिक शिक्षा कसलाई हस्तान्तरण गर्ने ? भनेर पनि छलफल भएको छैन । विश्वविद्यालयले अब कुनै पनि कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भनेर अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो ।
तर, यही मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६१ कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिए । आयोगका पदाधिकारीहरु आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमै नआए त्यसको के काम ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्छन् ।
बद्लिँदो परिस्थितिमा समयमै नयाँ शैक्षिक नीति तर्जुमा नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा परेको छ ।
अचेत अवस्थामा भेटिएका पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु
आन्दोलनकारीहरुसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग (ज्ञापन पत्रसहित)